DEG DEG;-Dowlada Itoobiya oo Cadeysay in Farmaajo uu Caqabad ku Noqdey Danahood Soomaaliya iyo Gabre oo Guud ahaanba… | AllJubbalandnews
DEG DEG;-Dowlada Itoobiya oo Cadeysay in Farmaajo uu Caqabad ku Noqdey Danahood Soomaaliya iyo Gabre oo Guud ahaanba…
Xildhibaanadda Soomaaliya ayaa si aqlabiyad leh ugu codeeyay Maxamed C/Lahi Farmaajo inuu noqdo maddaxweynaha Jamhuuriyadda Federalka Soomaaliya maamuli doona Afarta sano ee soo socota.
Shacabka Soomaalida ayaa aad usoo dhaweeyay Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, dibad baxyo nabadeysan ayaa is wada qabsadday meel waliba oo ay Soomaali dagan tahay, haba ugu badnaadeene dadka ku nool guddaha dalka.
Marka aad fiiriso sida ay dadka ugu hamuun qabeen Farmaajo waxaad moodda sida deegaan abaartu ku raagtay oo quus taagnaa balse ugu dambeyn heley roob, su’aasha isweydiinta muddan ayaa ah roobka lagu matalay Farmaajo ma waxa uu noqon doonaa ma hiigaan mise mid waqti yar uun soconaya.
Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa aaminsan in Farmaajo uusan ahayn sida ay dadka u wayneeyaan, iyagoo ku doodaya siyaasadiisa ku dhisan deg deg, laab lakaca, sidoo kale waxay ku sheegeen inuu yahay qof ku liita la macaamilka dowladdaha danaha gaarka ah ka leh Soomaaliya oo ay ugu koofiya dheer yihiin kuwa deriska.
DR: Cilmi Afyare oo kamid ah aqoonyahanadda Soomaaliyeed ayaa horaan u sheegay in Farmaajo guushiisa ay ku xiran tahay sida uu ula shaqeeyo dowladdaha Ethiopia iyo Kenya oo ah kuwa ugu badan ee faragalinta ku haya dalka Soomaaliya.